Warqaddii uu Trump u diray Kim Jong-Un - BBC News Somali
Warqaddii uu Trump u diray Kim Jong-Un
Madaxweynaha Maraykanka, Donald Trump, ayaa ka baxay balantii dhankiisa ahayd ee kulan madaxeedkii qorshaysnaa ee la filayey inuu bisha dambe la yeesho hogaamiyaha Kuuriyada Woqooyi, Kim Jong-un.
Waxa kale oo uu sheegay in ay suurto gal tahay in kulankoodaasi qabsoomin laakiin waxa uu uga digay Pyongyan waxa uu ku sheegay falalka "doqoniimada" ah.
Go'aanka Trump waxa uu soo baxay saacado uun ka dib markii Kuuriyada Woqooyi sheegtay in ay dumisay goobtii ay ku tijaabin jirtay niyuukliyeerka, arrintaas oo loo arkay in ay ahayd farriin heshiis oo dhabbaha u xaadhaysay shirmadaxeedkaa haantan la baajiyey ee ka dhici lahaa Singapore.
Warqaddi uu Trump u diray Kim Jong-Un
Waxaan si xishmad leh kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga, dulqaadkaaga iyo dadaalkaaga ku aaddan wadahalladii dhawaantaan la xiriiray shirka waqtiga dheer ay laba dhinac wada sugayeen, kaas oo la qorsheeyay in uu ka dhaco dalka Singapore 12 June. Waxaa naloo sheegay in kulanka ay codsatay Kuuriyada Waqooyi, balse arrintaasi hadda muhiim ma ahan. Waxa aan aad u rabay in aan kula kulmay. Nasiibdarrase, carada badan iyo gooddiga ka muuqday bayaankii aad dhawaantan soo saartay, waxa aan dareemay in kulankaas muddada dheer la qorsheynayay uu yahay mid aan xilligaan ku haboonayn. Sidaas darteed warqaddan waxa ay cadayn u tahay in shirkaasi uusan ka dhici doonin Singapore, taas oo ah mid labada dhinacba u wanaagsan, walow dunidu ay dhibsan doonto. Waxaad ka hadashay awoodda nukliyeerkaaga, balse keenna ayaa aad uga ballaaran ugana awood badan, marka waxaan Ilaahay aan ka baryayaa inaanay waligood la isticmaalin.
Waxaan moodayay inaan labadeenna yeelan doono kulan cajiib ah, muhiimaduna waxa ay aheyd wadahadalkaas uun. Waxa aan rajeynayaa in maalin un aan ku kulmi doono, hasayeeshee waxaan kaaga mahad celinayaa inaad sii daysay lahaystayaashii kuwaas oo si nabad ah qoysaskooda ula joogo. Taasi waxa ay ahayd tallaabo aad u wanaagsan, aad ayaanan kaaga mahadcelinayaa.
Haddii uu isbadel ku yimaado fikirkaaga ku aaddan kulankan muhiimka ah, fadlan haka laba-labayn in aad ila soo hadasho ama aad warqad ii soo qorto. Dunida, khaasatan Kuuriyada Waqooyi, waxa ay wadajir u lumiyeen fursad aad qaali u ah, taasi oo horseedi laheyd nabad iyo barwaaqo waarta. Fursadaan luntay waa mid meel xun ka galaysa taariikhda.
29 Nofembar 2020